Rita, Writing for My Sake!: ခုတ်ရာ နဲ့ ရှရာ
Posted by Rita at 11/24/2010 03:50:00 PM
အမေရိကန် အကြောင်းဖတ်ရတော့ ယူကျုထဲမှာ ဟာသ လုပ်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ American Are Not Stupid ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယို သွားသတိရတယ်။ ရှာပြီး ကြည့်လိုက်။ အတော် ရယ်ရတယ်။
အပြစ်ပေးလိုက်တဲ့ နည်း အသစ်လေး သိချင်တယ် မရီတာ...... Plz:
အသေးစိတ် မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကြာလှပြီ။ အဲဒီထဲမှာလည်း ဘယ်လို အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာ အတိအကျ မရေးထားဘူး ထင်တာပဲ။
ကြည့်ရတာ အရွယ်ရောက်ပြီး လူရွယ်တွေကို အပြစ်ပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ မူကြိုကလေးတွေလို နေ့လည် ထမင်းစားပြီး စောင်ခြုံအိပ်ကြ၊ မအိပ်ရင် တုတ်နဲ့ရိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မှာပေါ့။ ပဲဟင်းနဲ့ ထမင်းမကျွေးဘဲ ကွေကာအုတ်သောက်ကို သောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မှာပေါ့။ (ကိုယ့် ကွေကာအုတ် လာတိုက်ရင်တော့ ဒဏ်ပေးတာနဲ့ တူတူပဲ)
ဟုတ်မှာပါ မရီတာ... ကျနော်လဲ ကွေကာ သောက်ကိုသောက်ရမယ်ဆို ညစ်တာလို့ ပဲ ထင်တယ်... :P .. common ဖြစ်တဲ့ အပြုအမူတွေ နဲ့ဆက်ဆံတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..
ကျနော်လည်း ကြီးလာတော့ ခြင်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။ သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားလို့တော့မဟုတ်။ ခြင်ကိုက်တာနဲ့ မကြုံတော့လို့။ မကြုံဆို မြန်မာပြည်မပြန်ဖြစ်တာလဲ ခြောက်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီလေ။ အင်းစိန်တောင်သူကုန်းမှာ နေတုန်းကဆို မှောင်ရီပျိုးချိန် ခြံဝန်းထဲ ဆင်းမထိုင်ရဲလောက်အောင် ခြင်ပေါတယ်။း-)
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ခြင်ကိုက်ခံရယင် ကိုယ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်ရှိနေရင် တခြားသူတွေ အကိုက်မခံရလို့ သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ကို ခြင်ဆေးတုံးကြီးလို့တောင် ခေါ်တယ်။ :D ငယ်ငယ်က ခြင်ကိုက်ခံရယင် ပြန်ရိုက်တာပါပဲ။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်သည်းခံရင်း သိပ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုပေါပြောသလို ခြင်သိပ်အကိုက်မခံရတဲ့နေရာ ရောက်နေတာလဲ ပါမှာပေါ့။
ဖြစ်ချင်တာက ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ပထ၀ီ၊ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကြိုက်တယ်။ ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံ မပေါင်းခင်က ၉တန်းရောက်ရင် ငါတော့ ပထ၀ီ၊ သမိုင်း မသင်ရတော့ဘူးတွေးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ တကယ်တမ်း စနစ်ပြောင်းပြီး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် သင်ရတော့ ကိုယ်သင်ချင်တဲ့ ဓာတုနဲ့ဇီဝဗေဒတို့ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ မသင်ရဘဲ သုံးဘာသာတစ်အုပ်သင်ရလို့ စိတ်ထဲ မကျေမနပ် ဖြစ်ရသေးတယ်။
ခုနေဆရာမလုပ်ဖြစ်ရင်တော့ ပထ၀ီဘာသာရပ်ကိုပဲ သင်ချင်တယ်။း)
ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်မဆိုင် မသိဘူး၊ ခုတ်ရာနဲ့ရှရာ ဖတ်ပြီး ဇွန်ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာတာတွေ ၀င်ရေးသွားတယ်။ :D
သူများထက်ပိုပြီး ခြင်ကိုက်ခံရတတ်တာခြင်း တူတယ် =)
အခုနေ ဘဝကို ပြန်စလို့ ရမယ် ဆိုရင်တော့ ဘောဂဗေဒ သင်ချင်တယ်။
ဘယ်ကျောင်းမှ မတက်ဘဲ ကုန်သည် ပွဲစားတွေဆီမှာပဲ လက်တွေ့ တပည့်ခံချင်တယ်။
I gotamajor subject that was generally recognized as top among arts and sciences and only offered at two main universities for that time (now totally reversed).
One of our senior from Int'l firm said "Our major is better analytic and synthetic skills than other". I could not accept his remark, if he got other subjects, he will blow his own trumpet in different way.
I realize long life study is most important thing for every subjects and useful in respective ways.
For me, interesting subjects are Physics and History though mainly stick on own subject.
Sorry, I've just left one of favourite subject "Philosophy" with less knowledge on it.